Faka iPandora kwi-Samsung Galaxy S6 yakho
Izicelo zerediyo ye-Intanethi ziyindlela yokudlala umculo kwi-Samsung Galaxy S6 yakho. Nokuba uhlala kwisixeko esikufutshane okanye esikufutshane nesitalato esikhulu sokudayela usasazo, ukhetho lwendabuko lunokuphela. Irediyo ye-Intanethi isombulula loo ngxaki.
Zininzi izitishi zerediyo ezikhoyo. Enye yezona zicelo zithandwa kwi-Intanethi yiPandora. I-Pandora ikuvumela ukuba usete isikhululo sakho sikanomathotholo, onokuthi usenze ngokwezifiso okanye uguqule njengoko unqwenela. Landela la manyathelo ukukhuphela iPandora kwi-Samsung Galaxy S6 yakho kwaye uqale ulonwabo:
Thepha iVenkile yokudlala kwiScreen sakho sasekhaya.
Thepha iiNkqubo zokhetho kwiphepha lokuDlala lasekhaya iphepha.
Cinezela i icon yegilasi ekhulisa kwikona ephezulu ngasekunene kwaye uqalise ukuthayipha Pandora .
Olu ayilo suku lokuqala emsebenzini kwiVenkile yokudlala. Ngaphambi kokuba uthayiphe ngaphezu kweeleta ezimbalwa, iyaxhuma ekucingeni ukuba ufuna i-intanethi ye-intanethi ye-Pandora.
Khetha irediyo ye-intanethi yePandora.
Thepha oluhlaza Faka iqhosha kwaye wamkele iimvume.
Nje ukuba ifakwe, iphepha lokusebenza liyavela. Endaweni yokufaka kwibhokisi eblowu, uya kubona ukhetho lweVula okanye Khipha kwiibhokisi ezingwevu.
Isikrini sokungena siyabonakala. Kulapho unokungena khona ukuba sele unayo iakhawunti ngePandora, yithi kwiPC yakho, okanye ubhalise okokuqala.
Ukubhalisela iakhawunti yePandora, cofa ubhaliso lwasimahla unxibelelwano.
Isikrini sobhaliso siyavela. Oku kucinga ukuba awukenzi iakhawunti kwi-PC yakho.
Qhubeka ufake ulwazi lwakho kwaye ujonge ibhokisi eyamkela imigaqo kunye neemeko.
Thepha iRejista iqhosha.
Oku kuvula usetyenziso.
Ukukhetha uhlobo, cofa kwibhokisi yokubhaliweyo ethi Yenza iSitishi esitsha.
Cofa ukuKhangela kwiZitishi zohlobo.
Uluhlu lweentlobo zomculo ziyavela. Skena ngokhetho ngalunye kwi-nuance oyifunayo. Amathuba okuba uya kuyifumana!
isetyenziselwa ntoni iparoxetine
iivithamini iziphumo ebezingalindelekanga
ukuthabatha amaqhekeza aneedinomineyitha ezahlukeneyo
isilayidi neglu ye-elmer kunye nesepha